“Ma fileynin in Maxamed Saalax uu heerkan gaari doono” – Xiddig hore oo kooxda Chelsea ah – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Real Betis oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Barcelona oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou… +SAWIRRO
Origi oo guul muhiim ah farta ka saaray Liverpool oo booqatay Wolves, xilli Reds ay hoggaanka u qabatay Premier League… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Watford iyo Manchester City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
West Ham oo guul soo laabasho ah ka gaartay Chelsea oo marti ugu ahayd London Stadium… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Barcelona iyo Real Betis ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Wolves iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha West Ham United iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
“Ma fileynin in Maxamed Saalax uu heerkan gaari doono” – Xiddig hore oo kooxda Chelsea ah
Dajiye June 10, 2020
(Yurub) 10 Juun 2020. Laacibkii hore kooxda kubadda cagta Chelsea ee John Obi Mikel ayaa ka hadlay xiddiga naadiga Liverpool ee Maxamed Saalax iyo sida cajiibka ah uu ugu horumaray heerka uu hada gaaray,
John Obi Mikel ayaa wuxuuna si cad u sheegay inuusan fileynin in saaxiibkiisa reer Masar ee Maxamed Saalax uu noqon doono sida uu hadda yahay.
John Obi Mikel ayaa wareysi uu bixiyay dhawaantan wuxuu ku kaga hadlay Maxamed Saalax, wuxuuna yiri:
“Markii uu Saalax yimid London, wuxuu ahaa wiil da’ayar ah, laakiin wuxuu lahaa shaqsiyad cajiib ah oo ka dhigtay in qof walba uu jeclaado isaga”.
“Waxaan aheyn saaxiibo dhow, waan wada sheekeysanay, in badan waan kaftanay wuxuu ahaa saaxiib wanaagsan”.
Arinta ku saabsan in Maxamed Saalax uu ka mid noqday xiddigaha ugu fiican horyaalka Premier League wuxuu John Obi Mikel sharaxay inuu aaminay horumarka laacibka da’ayarka ah, laakiin kama uusan fileynin inuu gaarayo heerkiisa haatan.
Manchester City oo kaga yaabsatay kooxda Bayern Munich qiimaha Leroy Sané
“Waxaan diyaar u nahay inaan u tartano La Liga iyo Champions League” – Xiddig kooda Barcelona ah